Xog: FAHAD YAASIIN oo xil cusub u magacaabay Kulane - Caasim... - Axadle Wararka Maanta
Muqdisho (Axadle) – Taliyaha nabad sugida iyo sirdoonka Qaranka, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa xil cusub u magacaabay Cabdullaahi Aadan Kulane oo dhowaan uu xilka ka qaaday ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, sida ay ogaatay Axadle.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Axadle u sheegay in Fahad Yaasiin uu Cabdullaahi Aadan Kulane oo hore u ahaa madaxii shaqaalaha NISA u magacaabay kaaliyaha dhanka siyaasadda iyo amniga ee hay’addaasi.
Magacaabista xilka cusub ee Kulane, ayaa weli kusii haynaysa hay’adda NISA, hase yeeshee ilo-wareedyo ku dhow Fahad ayaa Axadle u sheegay inaysan jirin wax Kulane u diidaya inuu xil kale qabto.
“Kulane qalad uu galay ayaa xil looga qaaday, mana jirto meel ay ku qoran tahay in xil kale uusan qaban. Imisa wasiir ayaa horey xilal looga qaaday, oo haddana mar kale wasiiro ama ku xigeeno loo magacaabay?,” ayuu yiri ilo-wareedka la hadlay Axadle.
Abdiwahab Ahmed 3137 posts
Liverpool Oo Iska Diiday Xiddig United Ah , Chelsea Qorshe Cusub Ula